🔝Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwic 🌐 - I-Airbnb
🔝Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwic 🌐
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguIgor
Iflethi epholileyo, enelanga nefudumeleyo nenendawo entle yesixeko. Indlela ekhethekileyo eyakhiwe ngayo iyakwazi ukwamkela igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala eliyi-52 sq.m. Iflethi isembindini wesithili seshishini esixekweni, kanye embindini. Kwisikwere esiphakathi imizuzu eyi-3 ngemoto, uhamba imizuzu eyi-12 okanye uye kwiindawo eziliqela ngebhasi okanye ngebhasi. Iflethi ikumgangatho we-11 kwisakhiwo esitsha esiphezulu. Iflethi isandul 'ukulungiswa, inazo zonke izinto ozidingayo ukuze uhlale kamnandi.
Iflethi enkulu ekhethekileyo eyi-52 sq.m kwindlu entsha enebhalkhoni, igumbi lokulala elahlukileyo kunye negumbi lokuhlala ekhitshini. Umbono okhethekileyo wangaphambili wesixeko.
Iflethi isandul 'ukulungiswa kwaye inazo zonke izinto ozidingayo ukuze uhlale kwaye uhlale kamnandi, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu. Imizuzu eyi-3 ukuya kweyi-5 ngemoto ukuya kwisikwere esiphakathi. Iindawo ezikufutshane ziivenkile, amaziko oshishino, iivenkile ezinkulu, iMyuziyam Yobugcisa Bale Mihla, indawo entle yokunyuka intaba.
4.93 · Izimvo eziyi-76
Le ndlu ibekwe kwindawo efanelekileyo ukonwabela ukuhamba embindini wesixeko, apho kwenzeka khona ubomi bokwenyani: iikhefi kunye neendawo zokutyela ezimnandi, izikhumbuzo kunye neemyuziyam zeevenkile ezinomdla, ezinomtsalane kwizitrato zabahamba ngeenyawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Igor
Siya kuhlala sikuvuyela ukukwamkela, sinokuhlala sikunceda ngayo nayiphi na imibuzo, nangaliphi na ixesha losuku! Sihlala sonwabile ukunceda iiNdwendwe zethu !!!! Siza kucebisa ukuba ungatya phi kwaye ubone ntoni.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$1042
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chișinău